Nzira yekuwanazve chikonzero chako shure kwenguva yakaoma?
Yakatumirwa ne Tranquillus | Sep 28, 2018 | Kuvandudza wega
Kudzingwa, kufa kwemudiwa, bvunzo dzakundikana, kudanana-kurambana… chero munhu anogona kusangana nemiedzo iyi muhupenyu chero nguva. Paunenge uchipfuura nenguva yakaoma, zvakajairika kuti unzwe kusuruvara uye kugumbuka. Asi kana dutu rapera, tinofanirwa kuedza kuenda kumberi. Nzira yekuwanazve sei kurudziro?
Maitiro akanaka okuita
Tinogona kutaura pachedu kuti hakuna munhu anogona kupukunyuka kurohwa kwakaomarara uye kuti mushure memvura, kune yakanaka mamiriro ekunze. Kana matambudziko akamuka, iwe unoona kuti zvakaoma sei kukwira chikomo. Zvakaoma, asi zvisingaiti kana iwe uchiziva maitiro ekuzviita!
Mushure memuedzo wakakomba, isu tinowanzo kwidzwa nemanzwiro asina kunaka, kunyanya kutya. Izvi zvakajairika. Kune rimwe divi, hapana mubvunzo wekuzvibvumira kudzorwa nemanzwiro akashata. Tinofanira kuvabvisa, kunyange kuvavhima. Kuita sei?
Chekutanga pane zvese, iwe unofanirwa kuzvibvumira iwe kuti ugovane kurwadziwa kwako uye kusuruvara neavo vakakukomberedza. Kuchengeta kurwadziwa kwako pachako hakubatsire zvakanyanya. Zvakare, ziva kuti kuratidza kwako manzwiro hachisi chiratidzo chekushaya simba. Pane kupokana, idanho rinovaka kwazvo. Iyo inokutendera iwe kuti ugamuchire iwo mamiriro uye utore yakaoma hit sezvazvinofanirwa kuita. Iyo zvakare iri nani nzira yekudzivirira kunzwa kwekuzvipa mhosva uko kunogona kuparadza hunhu uye kuzvitemba.
Isolation yakaodzwa mwoyo zvakare. Tinofanira kuchengetedza hupenyu hwemagariro evanhu. Ndiko kubatsirwa kwevamwe kuti munhu anogona kuwana simba rokukunda dambudziko racho. Mukuwedzera, kuzviparadzanisa kunogona kukonzera pfungwa dzakaipa. Pavanozodzoka muchigamba, vanoita kuti vazvidye mwoyo.
VERENGA Ziva nzira yekuita zvisarudzo zvakanaka
Kushushikana mupfungwa muvengi wokurwisana nekuti zvichakudzivirira kuti urege kuita zvaunofunga zvakare. Tinofanira kuwana nzira dzakarurama dzekutarisira. Kana iwe ukabudirira kukurira kushungurudzika, iwe unogona kuchinja zvinoshamisa hupenyu hwako.
Kuti tivezve nemafungiro uye chido chekuenderera mberi, zvakakosha zvakafanira kuti tive nemafungiro akanaka. Kuti uite izvi, ingoita kuti kudzoka kuduku kune zvakapfuura kuti uyeuke zvimwe zvikwata zvave zvichitengesa. Zvinogona kukupa ushingi.
Ndechipi chinangwa chekumutsiridza matambudziko ekare? Muchokwadi, idanho rakakosha rinogona kukubatsira iwe kukunda zvipingamupinyi zvitsva. Chinangwa chikuru ndechekurangarira zvaunowana uye nesimba rako. Mune mamwe mazwi, isu tinofanirwa kubata nemusoro zviyeuchidzo zvakanaka, ndokuti nguva dzawakakwanisa kukunda kunetseka kwako.
Zvadaro, zvisinei kuti dambudziko ratinenge tangosangana naro, tinofanira kutaura kuti iyi haisi yekutanga. Kana tikakwanisa kudzokera shure, hapana chikonzero chekukundikana panguva ino. Zvinowedzera nyore kuwana chikonzero.
Tsvaga zviitiko zveupenyu muupenyu
Ichowo inzira inobatsira yekudzorerazve chikonzero chako shure kwekuedzwa kwakaoma. Iyo pfungwa ndeyokuona zvinhu nenzira yakanaka. Zvechokwadi, nguva yakaoma inokonzera kushungurudzika uye kutambura. Asi, anogonawo kukuunza chimwe chinhu.
Chokwadi, miedzo inosimbisa kugona kwako kutarisana nematambudziko. Sei ? Chaizvoizvo nekuti ivo vanozoda kuti iwe uunganidze zviwanikwa zvako zvese. Izvo zvinofanirwa kutaurwa kuti isu kazhinji tinowanzo kukanganwa kuvapo kwavo patinenge takapofomadzwa nemarwadzo uye kupererwa.
VERENGA 5 zvigaro zvinogona kubatsira zviri nani kutarisa kushushikana / kudzivisa kushungurudzika
Unofanirwa kutora nguva yekuongorora simba rako kuti ugone kunyatso rishandisa. Basa rekuvandudza wega riri pachirongwa. Iwe unongofanirwa kushandisa nzira kwayo kunongedza zviwanikwa zvako uye uone kuti une zvese zvinotora kuti udzokere kune hwakajairika hupenyu.
Ita zvinangwa zvakanaka
Mumamiriro ese ezvinhu, isu hatifanire kukanganwa kuti isu tangopfuura kuburikidza nekurohwa kwakaomarara uye kuti kukuvara kuchiri kuchangobva kuitika. Izvi zvinoreva kuti iwe uchiri panjodzi uye kuti hauna simba. Imwe nhamo inogona kukuuraya iwe. Nekudaro, isu tinofanirwa kuenderera nekungwarira.
Chinangwa ndechokuvaka zvakare zvishomanana. Hapana chikonzero chekuita hurukuro huru ndokubva wawira pasi paunosangana nechipi nezvipingamupinyi. Mumwe anofanirawo kudzivisa kushungurudzika uye kukanganiswa. Unofanira kuzvipa imwe nguva. Chisarudzo chakanakisisa ndechekugadzirisa zvinangwa uye zvinogona kuwanikwa.
Ziva kuti nekubheja zvakanyanya, unomhanya wakanangana nekuparara kwechikepe. Chokwadi, njodzi yekusazadzisa chinangwa yakakura kwazvo. Zvisinei, zvinongotora kuora mwoyo kushoma kana kuora mwoyo kuti iwe upinde mukushushikana kwakazara. Saka iwe unofanirwa kuzvipa iwe nguva uye utaure zvirevo zvinokurudzira senge "uchabudirira muyero yako".
Tora zvikwangwani nzira
Kuti uwane zvinangwa zvakatemwa, nzira dzekongiri dzinofanirwa kugadzirwa. Iwe unofanirwa kufunga kuti urikuenda kuhondo uye kuti kuti uwane kukunda unofanirwa kuve nezvombo zvakanakisa zviripo. Saka tinofanira kutanga nekusiya tsika dzakaipa. Mukuwedzera, tinofanira kuwedzera simba redu.
VERENGA Kuwedzera Kutya Kwemwe-Kutya Sechiito Chiratidzo
Uyewo ziva kuti izvo zvinokurudzira hazviwanikwi pasina kuzvikudza. Tinofanira kutenda mukubudirira. Mukuwedzera, dzidza kuziva maitiro ako. Usanonoka kukurudzira nhanho imwe neimwe yawatora. Iwe unofanirwa kunakidza kukunda kwose, zvisinei kuti uri muduku sei. Ziva kuti akakukumbira basa rakawanda uye ushingi.
Tinofanirawo kurega kufunga zvakanyanya nezvezveramangwana. Ndiyo iyo inowanikwa. Pakupedzisira, fungawo nezvekutaurirana manzwiro ako neaunoda, uye kuti haana kunaka kana kuti akanaka. Nokuita saizvozvo, iwe uchazove uchiwana chikonzero chako.
Mukupedzisa, kudzoreredza kurudziro yako mushure mekurohwa kwakaoma kunoda basa rakawanda. Hazviitike mukubwaira kweziso. Iwe unofanirwa kuzvipa iwe nguva uye pamusoro pezvose, iwe unofanirwa kuenda kumberi zvishoma nezvishoma. Ichi ndicho chikonzero zvichikosha kuti usaise zvinangwa zvepamusoro. Chinangwa chidiki chinokwanisika zuva nezuva chinopfuura zvakakwana. Kudzidza kuziva tsika dzako kwakakoshawo. Pamusoro pezvo, munhu anofanirwa kutenda mukukwanisa kwake kubudirira uye kudzidza kudzika nekuunganidza zviwanikwa zvake.
Nzira yekuwanazve chikonzero chako shure kwenguva yakaoma? Svondo 21st, 2018Tranquillus
pashureNzira yekukurumidza kugadzirisa spelling yemagwaro ako, kuwanikwa Antidote software.
zvinoteveraNzira yekugadzira yako email yechinyorwa paIndaneti nyore nyore uye yekusununguka
Chisarudzo Kuita-Maitiro Aungaita Sei Sarudzo Yakarurama?